हादैर् आएको नेपालको अब जित्ने पालो | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / हादैर् आएको नेपालको अब जित्ने पालो
हादैर् आएको नेपालको अब जित्ने पालो
Posted by: युगबोध in विचार August 9, 2018	0 117 Views
आजभो लि प्रतिपक्षमा बसे का एकथरी राजनीतिक ने ताहरु अधिनायकवाद आउनै लाग्यो भने र प्रजातन्त्रको दुहाइ दिदै छन् । सत्तामा बसे का अर्काथरी कम्युनिष्ट भए पनि हामी लो कतान्त्रिक (बहुदलीयता मान्ने ) गै रअधियाकवादी कम्युनिष्ट हौ ं, डराउनुपदैर् न भन्दै छन् । कतिपय बुद्धिजीवीलगायत सामान्य जनता अन्यौ लमा पनि हो लान् । तर एउटा यथार्थ चाहि“ के हो भने कांग्रे स सभापति शे रबहादुर दे उवाले छ महिनाअघि चुनावको बे लादे खि ‘कम्युनिष्टहरुले अधिनायकवाद ल्याउ“छन् । हामी प्रजातन्त्रवादीलाई भो ट दिनुुस् भन्दै मन्त्रीको है सियतमा चुनाव प्रचार गर्दागदैर् पनि निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्टहरुलाई जिताइ छाडे  । अहिले २ नंं. प्रदे शबाहे क सबै तिर ने कपाको अत्यधिक बहुमतको सरकार छ ने पालमा । अब त दुई तिहाइ बहुमत सरकारको पक्षमा गइसक्यो  ।
अर्कातिर दुई तिहाइ बहुमतलाई हा“क दिदै कांग्रे सले दो हो ¥याउ“दै ते ह¥याउ“दै अझ बारम्बार भनिरहे छ– अधिनायकवाद अधिनायकवाद…. । यहा सम्म कि प्रधानमन्त्री के पी ओ लीबाट राजीनामाको माग गरिदै छ । यतिबे ला सदन मात्र विभाजित छै न अपितु वकिलहरु, पत्रकारहरु, बुद्धिजीवीहरुसमे त विभाजित छन् । के हो ला, के नहो ला भने र कतिपय जनता अलमलमा परे का जस् ता पनि दे खिन्छन् । म अरुको बुझाइबारे बढ्ता टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न । मात्र आफ्नै अनुभवको आधारमा के ही कुरा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छु । मे रो बुझाइमा नायक भने को अगुवा या ने ता हो  । नायकमा अधिनायक थप्दा अधिनायकवाद बन्छ । आशय एउटै हो  । त्यसमा अलि जो ड दिएको हो  । सामान्य अगुवा अथवा विशे ष अगुवा भने जस्तै  ।
दुनिया“को इतिहास साक्षी छ– संसार हा“क्ने अगुवाहरु नै हुन् । अहिले ती अगुवा कहलाए, कहिले राजा कहलाए । कहिले अधिराज कहलाए । शासक, प्रशासक कहलाए । पछिल्लो कालखण्डमा नायक, ने ता आदि कहलाए । लिखित इतिहास धे रै पछिको कुरा हो  । बे द पनि श्रुति परम्परा हो , धे रै पछि लिखित हुन आयो  ।
त्यहा“ राजाको पनि चर्चा छ, गणराज्यहरुको पनि चर्चा छ । महाभारतमा स् पष्टै ले खिएको छ । प्राचीनकालमा राजा पनि थिएनन्, राज्य पनि थिएन । कुनै दण्ड विधान वा न्यायालय पनि थिएन ।
धर्मबाटै संसार चले को थियो  । त्यो धर्म प्राकृतिक नियमअनुसार कर्तव्यबो धबाट मान्छे मा उब्जे को थियो  ।
एंगे ल्सको परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यसत्ताको उत्पत्ति भन्ने पुस् तकमा विस् तृत विवरण ले खिएको छ । अमे रिकी विद्वान मो र्गनले पनि आफ्नो ‘प्राचीन समाज’ भन्ने पुस् तकमा यस् तै कुरा ले खे का छन् ।
प्राचीन युनान खासगरी एथे न्समा हात उठुवा प्रजातन्त्र थियो  । त्यहा“ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भएको चर्चा छ । संसारमा जनसंख्या बृद्धिले हात उठुवा प्रजातन्त्र चल्नै सके न । ब्रिटे नमा ‘नो टे क्से सन विदाउट रिप्रजे न्टे शन’ कै ै यौ ं शताब्दीको कुरा हो  । त्यो बे लासम्म दास र महिलालाई मताधिकार थिएन । यसरी शासकहरुले , राजा महाराजाहरुले हुकुमी शै लीले राज गथेर्  । मै ले बुझे को यही हो जस् तो लाग्छ । ने पालको पछिल्लो कालखण्डमा खासगरी पृथ्वीनारायण शाहले ने पालको एकीकरण गरे पछि पनि आजको जस् तो संविधान अनुसार शासन र अने क थरीका राजकाज चले  । बाहुबलबाटै राज्य चले  । हरे क शासकका हात रगतले मुछिएकै छन् । ने पालमा विक्रम सम्वत १९०३ मा जंगबहादुरले को तपर्व चलाएर एक सय तीन वर्षसम्म राज गरे  ।
इतिहासको आर्थिक पक्ष र सामाजिक पक्षमाथि विचार गदैर् जाने हो भने खराब भन्दा खराब शासकहरुले के ही राम्रा काम पनि गरे का छन् । उदाहरणस् वरुप जंगबहादुरले मुलुकी ऐ न ल्याए । सीमामा जंगे पिलर खडा गर्न लगाए र सुगौ ली सन्धिपछि गुमे को भू–भाग बा“के , बर्दिया, कै लाली, कञ्चनपुर फिर्ता गराए । तर उनी र उनका उत्तराधिकारीहरुले धे रै नराम्रा काम पनि गरे  । राणा शासनको इतिहास पनि रक्तरञ्जित रह्यो  । आफूहरुको ऐ श्वर्य खडा गरे  । समयले प्रजातन्त्रको हावा चलायो । निरंकुश राणातन्त्र समाप्त भयो  । २००७ सालमा राणाहरुको अधिनायकवादी शासन समाप्त भयो  । प्रजातन्त्र आयो  । ले ख्ने , बो ल्ने र संगठन गनेर् स्वतन्त्रता प्राप्त भए पनि दे शको अवस् था राम्रो हुन सके न । दे श स् वतन्त्र भनिए पनि ने पालको सार्वभौ मिकता र स् वतन्त्रता खुम्चियो  । ने पालका २२ ठाउ“मा भारतीय से नाहरु आएर पहरे दारी गर्न थाले  । क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा विक्रम सम्बत १९५० मा ने पाल–भारत असमान सन्धि भइसके को थियो  । त्यसपछि पनि अने क असमान सन्धि सम्झौ ता भए  ।
मातृकाको पालामा को शी सम्झौ ता भयो  । विपिको े पालामा गण्डक सम्झौ ता भयो  । यी दुबै असमान सन्धि सम्झौ ताको पीडा अहिले सम्म ने पालले भो ग्दै छ । ०४६ सालपछि पनि जननिर्वाचित सरकारहरुले सारा राजकीय उद्यो गहरु निजीकरण गरिदिए । दे शलाई औ द्यो गिकीकरण गर्न सके नन् । दक्षिणतिरबाट हुने सीमामा थिचो मिचो । सीमामा बा“च बनाएर जनताको उठिबास र डुबान रो क्न के ही गरिएन । सुस् ता, महे शपुर, माने भञ्ज्याङलगायत झण्डै साठी ठाउ“मा भारतीय थिचो मिचो रो किएको छै न । अझ थप टनकपुर सन्धिलगायत अने क असमान सन्धि थपिएको थपियै छन् । दख्खिनतिरको तीन पटकको नाकाबन्दी ने पाली जनताले बिसेर् का छै नन् । यी सबै प्रजातन्त्रको खो लमा अधिनायकवादी शै ली (मिचाहा शै ली) कै नमूना हुन् । यी सबै टुलु टुलु हे नेर् ने ताहरु के हुन् ? ने ता कि अधिनायक वा आत्मसमर्पणवादी ?
यो सबै भो गे को जनतामा विरो ध छ, आक्रो श छ, बिद्रो ह छ । फलतः यसले एउटा विरो ध र निषे ध एवं शंकाको राजनीति पनि जन्माएको छ । यो आक्रो श र निषे धलाई उहिले राजाहरुले भजाए । पछि कांग्रे स र कम्युनिष्टहरुले पनि भजाए र शासन गरे  । कसले कति वर्ष कति दिन कसरी शासन गरे इतिहास साक्षी छ । भुक्तभो गी जनता साक्षी छन् । यस् तै संघर्षको भुमरी पार गदैर् मुलुक लो कगणतन्त्रसम्म आइपुगे को छ । सै द्धान्तिक हिसाबले यहा“ भन्दा पर अकोर् सुन्दर स् वर्गको पक्ष पनि दे खिन्न । कम्तिमा जनताले अहिले स् िथर सरकार दिएका छन् । विकास, सुख र समृद्धिका खाका पनि दे खिएका छन् । सयौ ं सयौ ं वर्षको बे थिति छ महिनामै समाप्त हुन सक्दै न । कम्तिमा पा“च वर्ष त लाग्छ । अफशो च, मुलुकलाई अस् िथरतातर्फ धके ल्ने काम हुन लागेको पनि दे खिन्छ ।
नायक, अधिनायक, तानाशाह, प्रजातन्त्रवादी, लो कतन्त्रवादी जे सुकै नाम दिनो स् मुख्य कुरो काम हे नेर् हो  । हाम्रो यहा“ दे खिने राम्रो नराम्रो , विकास, विनाश, एक दिनको है न सयौ ं वर्षदे खिको फो हो र मै ला, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार पनि छ । पापाचार, पनि छ । यहा“ मान्छे को सुन्दर कलाकृति पनि छ । शिक्षा, स् वास् थ्य, यातायात, सञ्चार आदि पनि । अतः राम्रालाई राम्रै र नराम्रो लाई नराम्रो भन्न किन नसके को ? कसै ले कालो मात्रै दे ख्ने , कसै ले से तो मात्र दे ख्ने , जस् ताको तस् तै दे ख्न किन नसक्ने ? सधै ं आक्रो श र निषे धको राजनीति मात्र किन ? यसको अर्थ सबै राम्रो मात्र दे ख्न भने कै है न । व्यक्तिगतरुपमा मलाई पनि धे रै कुरा चित्त नबुझे को हो ला । भर्खरै नया संविधान, नया–नया सरकारहरु आएका छन् । तिनलाई उल्ट्याउने गरी है न, अस् िथरता ल्याउने गरी है न सुधानेर् र सपानेर् हिसाबले आलो चना र टिकाटिप्पणीको आवश्यकता छ ।
कतिपय भ्रष्टाचारीहरु कतिपय, कालाबजारीहरु कतिपय घूसखो र र कमिशनखो रहरु, कतिपय सिण्डिके टधारीहरु ककसको आडमा फे रि शीर ठाडा पार्न बल गरिरहे छन् ? त्यो हे नेर् कि नहे नेर् ? सत्तामा बस् ने हरु पनि किन भ्रष्टहरुसामु दबे को स् वरमा बो ल्न लागे का छन् ? त्यो हे नेर् कि नहे नेर् ? जसले अग्रगामी कदम चाल्न खो ज्छ त्यसलाई मद्दत गनेर् हो  । पछौ टे सो च राख्ने हरुलाई पछाडि धके ल्ने हो  । जनताले दूधको दूध पानीको पानी खुट्याउने बे ला यही हो  । त्यो छुट्याउन नसक्ने गरी बो ल्नु अधिनायकवादीलाई मदत गर्नु हो  । कांग्रे स र कम्युनिष्ट या अन्य कुनै नामधारी बन्दै मा राम्रो वा नराम्रो भन्न खो ज्नु बौ द्धिक दरिद्रता हो , पाखण्डीपन हो  । ने पालको विगतको इतिहासमा कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस् थापिका सबै बिटो लिएका छन् । चो खा छै नन् । शब्दजाल छो डौ ं, काम कुरो हे रौ ं । विगत र वर्तमानका काला से ता सबै कर्म कुकर्म भो गे का जनता साक्षी छन् ।
सुगौ ली सन्धिदे खि हादैर् आएको ने पालीले अब जित्ने समय आएको छ । त्यो सही कांग्रे सले जितो स्, सही कम्युनिष्ट, सही अकोर् कुनै इष्टले जितो स् । चाम (छाला) प्यारो है न काम प्यारो हुन्छ । सबै लो कतान्त्रिक शक्ति मिले र ल्याएको नया“ व्यवस् था हो  । यसमा धमिरा लाग्न नदे औ ं । हिजो कांग्रे सको बलमा कम्युनिष्टले राज गरे को र कम्युनिष्टको बलमा कांग्रे सले राज गरे को हाम्रै आ“खाले दे खे का छौ ं । आज कम्युनिष्ट या कांग्रे सले अधिनायकवादको फलाको गरे र जनताले पत्याउने वाला छै नन् । दुबै ले आफ्ना गल्ती सच्याउन् । विवे क भए दुबै मिले र अगाडि बढून् । कम्तिमा समालिएर बो लून् । उत्ते जनाले कहीं पु¥याउदै न ।
Previous: अगष्ट ६ र ९ विश्वमा कालो दिनको रुपमा अंकित
Next: राज्यको लगानी खेर जाँदै